Sawirro: Xabaal Wadareed laga Helay Gobolka Oromia iyo Maleeshiyada Liyuu Booliska Oo Shacab Ku Xasuuqday Magaalada Harar.
Sunday December 24, 2017 - 12:14:49 in Wararka by Super Admin
Wadanka Itoobiya waxaa lagasoo sheegayaa iska hor'imaadyo dhiig badan ku daatay oo u dhaxeeya dhinacyo kala duwan oo ku loolamayo gobollo wadankaasi katirsan.
Xiisadaha u dhaxeeya dadka Soomaalida iyo Oromada ayaa wali lagasoo sheegayaa deegaanno katirsan gobollada Oromia iyo Somaligalbeed oo ah gobollo ku jira gumeysiga Xabashida Itoobiya.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in weerar cusub oo maleeshiyaadka Liyuu Booliska ay ka geysteen duleedka magaalada Harar ay ku dileen ku dhawaad Toban qof oo shacab ah.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in Maleeshiyaadka Liyuu Booliska oo wata gaadiid dagaal ay 7 qof shacab muslimiin Oromo ah ku dileen duleedka magaalada Taariikhiga ah ee Harar.
Maleeshiyaadkan oo dowladda Itoobiya ay sanaddii lasoo dhaafay ku daad gureysay gobolka Oromia si ay u dambiyaan kacdoonka shacbiga ah ayaa geystay gabood fallo baahsan iyo xasuuq ka dhan ah dadka shacabka ah.
Hoggaamiyaasha qabaa’illada Oromada iyo Soomaalida waxay ku eedeeyeen Maleeshiyada Liyuu Booliska in ay fitno ka dhax kiciyeen labada shacab taas oo keentay in boqolaal qof ay dhinacyadu iska dilaan.
Dhinaca kale Xabaal wadareedyo ay ku aasanyihiin Tobanaan qof Soomaali ah ayaa laga helay deegaanno katirsan gobolka Oromia sida ay sheegeen saraakiisha Booliska dowladda Xabashida Itoobiya.
Khamiistii lasoo dhaafay xildhibaanno katirsan Baarlamaanka Itoobiya aaa diiday in ay soo xaadiraan fadhigii Baarlamaanka oo uu khudbad ka jeedin lahaa R/wasaaraha wadankaasi, xildhibaanada kasoo jeeda Qowmiyadda Oromia ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe ee Itoobiya in ay wax ka ogtahay xasuuqa ay ciidamada melleteriga iyo kuwa Booliska ugeysanayaan dadka shacabka ah.
Gobolka Amxaaradu degto isna waxaa lagasoo sheegayaa iska hor’imaadyo iyo dibad baxyo rabshada wata waxaana muuqata in Kacdoonkii ka dhanka ah Taliska Addis Ababa uu wali kasii socdo qeybo badan oo wadanka katirsan balse warfaafinta dowladda ay isku dayayso in ay indhaha caalamka ka qariso.